မှောင်နေတဲ့နေရာမှာ ကြည့်လို့ရတဲ့မှန် Glowing Mirror | Myanmar Free Ads ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / Austin / Electronic Products / မှောင်နေတဲ့နေရာမှာ ကြည့်လို့ရတဲ့မှန် Glowing Mirror
မှောင်နေတဲ့နေရာမှာ ကြည့်လို့ရတဲ့မှန် Glowing Mirror
Maung Pauk 10:50 AM Austin , Electronic Products
ခေတ်မီဆန်းပြားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေပေါ်လာတာ ကောင်းတာပေါ့.. ခု ပြောပြမယ့် ပစ္စည်းလေးကို မိန်းကလေးတွေ အကြိုက်တွေ့မှာပါ.. မီးလင်းမှန်လေ..
A glowing makeup mirror (RT-L01) တဲ့..
မီးပြတ်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလင်းရောင်မရှိတဲ့နေရာကိုရောက်တုန်း မှန်ကြည့်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သီးခြားမီးထွန်းပြီး မှန်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူး.. မှန်ဘောင်မှာ မီးလေးတွေပါတယ်.. အဆင့် ၃ ဆင့်နဲ့ အလင်းကိုချိန်လို့ရတယ်..
စလင်းဘတ်အိတ်ထဲ ထည့်ယူသွားလို့ရတဲ့ အရွယ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်.. သိပ်လည်းမထူဘူး. အားကုန်သွားရင် အားတော့သွင်းရတယ်..
အားအပြည့်ဆို ၆ နာရီခံတယ်..ဘယ်သူက ၆ နာရီလုံးလုံး မီးထွန်းပြီးမှန်ကြည့်နေမှာတုန်းလေ.. ဒါဆို တစ်ခါ အားသွင်းထားရင် ၃/၄ ရက်သုံးလို့ရတာပေါ့..
ဈေးကတော့ 17500 ကျပ် တဲ့.. 09450584676,09770433574 ကို ဖုန်းဆက်ဝယ်ယူနိုင်တယ်ဆိုပဲ...
ခတျေမီဆနျးပွားတဲ့ ပစ်စညျးလေးတှပေျေါလာတာ ကောငျးတာပေါ့.. ခု ပွောပွမယျ့ ပစ်စညျးလေးကို မိနျးကလေးတှေ အကွိုကျတှမှေ့ာပါ.. မီးလငျးမှနျလေ..
မီးပွတျသှားလို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ အလငျးရောငျမရှိတဲ့နရောကိုရောကျတုနျး မှနျကွညျ့ခငျြရငျပဲဖွဈဖွဈ သီးခွားမီးထှနျးပွီး မှနျကွညျ့စရာမလိုတော့ဘူး.. မှနျဘောငျမှာ မီးလေးတှပေါတယျ.. အဆငျ့ ၃ ဆငျ့နဲ့ အလငျးကိုခြိနျလို့ရတယျ..
စလငျးဘတျအိတျထဲ ထညျ့ယူသှားလို့ရတဲ့ အရှယျဆိုတော့ အဆငျပွတေယျ.. သိပျလညျးမထူဘူး. အားကုနျသှားရငျ အားတော့သှငျးရတယျ.. အားအပွညျ့ဆို ၆ နာရီခံတယျ.. ဘယျသူက ၆ နာရီလုံးလုံး မီးထှနျးပွီးမှနျကွညျ့နမှောတုနျးလေ.. ဒါဆို တဈခါ အားသှငျးထားရငျ ၃/၄ ရကျသုံးလို့ရတာပေါ့..
စြေးကတော့ 17500 ကပျြ တဲ့.. 09450584676,09770433574 ကိုဖုနျးဆကျဝယျယူနိုငျတယျဆိုပဲ...